I-Buckwheat groats - isibambiso sobutsha kunye nokuphelela
Ukuba ngaphambi kokuba i-porridge ibhekwe njengento yokutya kwabahlali, namhlanje, xa uyiyalisa kwindawo yokutyela efanelekileyo, kunye nejusi esanda kumiswa okanye i-saladi evela kwi-arugula, unokuqiniseka ukuba ubonisa ukulungeleka kakuhle, ukujonga okubonakalayo kokutya kwaye, ngaphandle koko, khusela isalathisi sakho . I-Buckwheat iyisiqinisekiso sobutsha kunye nokuphelela komzimba wakho.
Igama legama le-buckwheat libonisa ngokucacileyo kwimvelaphi yalo yaseByzantine. Yingakho abaninzi abantu bakholelwa ukuba iGrisi yindawo yokuzalwa ye-buckwheat.
Nangona kunjalo, oku kukukhohlisa . Ilizwe lakhe - kungekhona iGrisi kwaye kungekhona iByzantium, kodwa i-Himalaya. Ngendlela, i-buckwheat - ingabi isisitye, abantu abaninzi bacinga, kodwa kubudlelwane obusondeleyo kunye ne-sorrel kunye ne-rhubarb.
Ngethuba lokuqala le nkcubeko yaqala ukuhlakulwa malunga ne-6 000 leminyaka edlulileyo kwi-Asia-mpuma ye-Asia. Kwamazwe ahlukeneyo yabizwa ngendlela yayo - njengommiselo, ngegama lelizwe elivela kuyo. Ngokomzekelo, eGrisi naseItali, i-buckwheat yaba "ngumbona waseTurkey", isiFrentshi, iSpanish nesiPutukezi- "Saracen" okanye "iArabhu", i-Finns - "iTatar", naseJamani - "isihedeni". E-India buckwheat yayibizwa ngokuthi "irayisi emnyama", kwamanye amazwe - "ingqolowa emnyama".
Abantu baseMelika kunye nesiNgesi babiza i-buckwheat buckweat , eguqulela ngokuthi "ingqolowa yenyamazane". Intsimi apho i-buckwheat ikhula khona, ibonakala njengekhaphethi eluhlaza kunye neentyantyambo eziluhlaza. Yaye yiphunga elimnandi! Akusiyo into yokuba iinyosi zihlala zibonakala zingabonakali. EFransi buckwheat ikhulile kuphela ngenxa yobusi. Ubusika be Buckwheat bubhekwa njengeyona nto ibhetele - eyona nto ilumnandi kwaye iluncedo kakhulu-kwaye isetyenziswe njengendlela yokulungisa imiphunga nemfucuza. Kodwa oku kukuphela kokuthandana kwe-buckwheat phakathi kweFrentshi, njengabanye baseYurophu. Kwaye ngelize ... Sineenkcubeko ezikhulile kwiindawo ezinkulu, nangona ukuba ukufumana isityalo se-buckwheat akulula.
Okhokho bethu babibiza ngokuba ngamacandelo alo masiko "buckwheat", kuba beza eKevanvan Rus evela eGrisi. Babenxila kwaye baqhele ukuhlala ekhitshini njengokuba bezalamane. Kwindawo yokusetyenziswa kwe-buckwheat, amaSlav akungabazeki "ngaphambili kwiplanethi yonke." Lo ngumkhiqizo wethu omdala ubudala, oko kuthetha ukuba luyena nto iluncedo kuthi. Emva kwakho konke, kungekhona nje iphariji, kodwa nakwezinye izitya ezininzi zesizwe - ama-pancake, ii-pies kunye neesobho - ilungiselelwe ngokuthe ngqo kwi-buckwheat. ERashiya kwakukho inkolelo enjalo ukuba i-buckwheat kufuneka idliwe ngethuba lezilingo ezinzulu-kuba linika umntu amandla amakhulu kunye nobuchule obukhethekileyo. Ngaba i-buckwheat groats isibhambathiso sobutsha kunye nokugqwesa umzimba wethu?
Ukongeza kwiSlav, i-porkri ye-buckwheat isahlonishwa yi-Asiya. Kodwa awuyi kukholwa, emva koko, emva kwakhe kwiLizwe lokuSuka kwelanga, ezininzi iidolophana, imilambo kunye nezitishi zendlela. AmaJapane adla, nangona kungenjalo i-porridge, kunye neodle zabo ezikhethekileyo ezivela kufulawa we-buckwheat. Kwaye amaKorea, akukho iholide enye inokuyenza ngaphandle kwee-mee-mes - bendabuko kwi-flour buckwheat. AmaTshayina enza kwakhona kwitokorale, i-jam kunye ne-liqueurs.
Namhlanje i-buckwheat porridge ayikwazi ukubonwa njengabantu abahluphekileyo. Yilungiselelwe kwiindawo zokudlela ezibiza kakhulu. UkuLawula kuye kwanefestile, ekubeni uthando lwe-buckwheat porridge lubonakaliso olucacileyo lwesondlo esifanelekileyo kunye nendlela yokuphila enempilo.
Yiyiphi eyona nto iluncedo?
I-buckwheat groats zintlobo ezimbini - i-kernel kunye nokunqunyulwa. Zomibini ziveliswa kwi-ngqolowa ye-buckwheat ngokuhlukana kweziqabana zeqabunga. I-kernel yi-kernel epheleleyo ye-buckwheat, kwaye i-perforation ingundoqo, yahlula ibe yindawo. Ngoko ke, ukuba ufuna ukuba ukutya kwakho kuguquke, kungcono ukuthatha i-jade.
I-steamed buckwheat groats inomthunzi omhle, iphunga elimnandi elibonakalisa ngokugqithiseleyo kwi-porridge eligqibekileyo, kwaye ngaphezu koko, i-cereal steamed yenziwe ngokukhawuleza.
Ngama-gramu angama-100 ama-buckwheat groats angabonwayo angama-320% ama-vithamini angama-107, i-vitamin PP kunye ne-100% ngaphezulu ne-calcium kunye ne-zinc (idatha isetyenziswe kwisiseko se-laboratory-chemical analysis of non-fried buckwheat groats). Kwi-100 gram ye-buckwheat iqulethe isahlulo sesithathu semveliso yesinyithi efunekayo emzimbeni womntu.
Ukutya okungaqhelekanga kwe-bucatsheats ngenye yezinto ezimbalwa zokutya ezifanelekileyo ezifanelekileyo zokutya eziqhelekileyo kunye nezondlo. Uncedo kwaye unonondlo, lufumaneka kuwo wonke unyaka kwaye luyindlela efanelekileyo yokufumana irayisi. Abantu abaninzi, xa bezama i-porridge ye-buckwheat, bathi i-buckwheat groats ifungisa ulutsha kunye nokufezekiswa kwenyama yonke.
I-Buckwheat, kunye ne-groats engeyiyo ebusiweyo ayifanelekanga nje kuphela ngezolimo, kodwa i-groats, kunye namadada aphekiweyo, i-geese kunye nama-piglets agxile nge-buckwheat.
Xa ukhetha i-buckwheat, qwa lasela ibakala kunye nokubonakala kwayo. Umgangatho ophezulu - ibakala eliphezulu. Kulo bakala lokuqala, kukho ubuncwane obuthile obuninzi obuvela kwiingqolowa eziphukileyo.
Xa uthengisa i-buckwheat, kufuneka ukhethe inqabileyo kakhulu, njengoko i-croup ebomvu sele isele iqhutywe ukushisa okuphezulu, ngoko ke, i-alas, ilahlekelwe ezininzi iimpawu zayo.
Ukuba ekhaya, ukukhupha isikhwama se-buckwheat, uziva unobumba okanye enye iphunga langaphandle, kuthetha ukuba i-groats ichithiwe, kwaye unelungelo lokulibuyisela kwisitoreji. Gcina i-buckwheat groats efanelekileyo kwiiglasi okanye izitya ze-ceramic, kodwa kungekude kakhulu, kuba ngaphezu kwexesha, ukunambitheka kwayo kubonakala kuphazamiseke, kwaye iimpawu zondlo ziyancitshiswa.
Buckwheat: iimfihlelo zokupheka
Ingcali enkulu yokupheka uWilliam Pokhlebkin yakhalaza ukuba ipilishi yokupheka ibonakala into elula kakhulu. Ngoko balungiselela "ithuba". Umpheki owaziwayo wanikela ngcebiso eluncedo lokulungiselela ukutya okutya okumnandi. Kwi nganye yunithi yevolumu, iinkozo zithatha kabini amanzi amaninzi, zifake ibhodlela okanye ibhodlela ngeeporji eneqhekeza elincinci, upheke kuqala ekushiseni okuphezulu, ngoko kwi-encinci, kwaye ekugqibeleni uye womelele, de kube amanzi aphephe ngokupheleleyo. Kwaye enye imfihlelo yenkosi ayiyikuvula isiqhekeza ngexesha lokupheka, kuba i-porridge ibalulekile kungekhona amanzi amaninzi njengamanzi.
Ukutya kunye nezongezelelo zezinto eziphilayo
Yiba neemeko nakwiintsuku ezinamafu
Iipropati eziwusizo zekhowudi yesibindi
Iipropati eziwusizo zetiyizi ze-ginger
Ukutya okumnandi kunye okunempilo kumzimba
Inyawo laseShayina kunye ne-shin massage
Isaladi kunye namakhukhamba aqhathanisiweyo
Indlela yokufakela kumntwana umnqweno wokufunda
Indlela yokwenza ubusuku bothando?